HALKAAN KA AQRISO W/WARGEYSKA MOGADISHU TIMES AXAD 19-KA SEPTEMBAR 2021-
Sunday September 19, 2021 - 08:02:40 in Wararka by Mogadishu Times
Villa Somalia oo baajisay shirkii Golaha Amniga Qaranka
Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Ma xamed C/hi Farmaajo ayaa dib u dhigay shirkii uu iclaamiyey ee amniga qaranka, kaas oo la gu waday in Shalay uu qabsoomo.
Afhayeenka madaxtooyada Cab dirashiid Maxamed Xaashi ayaa qor aal uu soo saaray ku sheegay in dib ay ka soo shaaci doonaan goorta la qabanayo shirka amniga qaranka ee Farmaajo iclaamiyey.
"Shirkii Guddiga Amniga Qaranka ee DFS ee uu hore u iclaamiyay Madaxweynaha JFS Md.Farmaajo in uu qabsoomo Shalay oo ay ta ariikhdu tahay 18-09-2021 dib ayaa loo dhigay, waxaana idinla soo wadaagi doonnaa xilliga u gu habboon ee uu qabsoomi karo,” ayuu qor aalkiisa ku yiri afhayeenka madaxtooyada Cab dirashiid.
Shirkaan waxaa codsaday Agaasimihii hore ee NISA Fahad Yaasiin, taas oo lagu soo ban dhigayo warxinta sidii loo dilay Ikraan Tahliil Faarax.hase yeeshee Fahad Yaasiin hadda waxaa loo diiday inuu dalka soo galo, taas ay aana keentay in shirkaan uu baaqdo, Fahad ay aa Dorraad laga celiyey Jabuuti, isaga & rakaab kii la socday, waxaana Shalay Muqdisho timid diyaaradii Dorraad ku celisay Istanbuul – TurkI ga.
Ra’iisul Wasaaraha XFS ee xilgaarsiinta Md.Maxamed Xuseen Rooble ayaa Shalay oo guddoomiyay shirka tiirka dhaqaalaha oo ka qeyb galeen Wasiiro ka tirsan Xukuumadda.
Inta uu socday shirkaan oo ka dhacay Xafiiska R/Wasaare Rooble ayaa waxaa Xafiiska hanti dhowraha guud ee Qaranku ku soo bandhigay xogta dhaqa ngalka mashaariicda horumar ineed ee dalka.
Sidoo kale, W/Qorsheynta, Maalgashiga & Horumarinta Dhaqaalaha ee xilgaarsiinta ayaa madasha shirka tiirka dhaqaalaha soo jeedisay nidaamka keydinta mashariicda ee AIMS.
Shirka tiirka dhaqaalaha ayaa waxaa ka qe yb galay Wasiiro ka tirsan Xukuumadda oo ka mid yihiin Wasiirka qorsheysan Jamaal Maxa med Xasan, Wasiir Xil. Khaliif Cabdi Cumar iyo Mas’uuliyiin kale.
Xasan Sheekh oo war kasoo saaray xaalad da dalka baaqna u diray ciidanka
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Md.Xa san Sheekh Maxamuud oo shir jaraa’id qabtay ayaa ka hadlay xaaladihii u dambeeyey ee siy aasadda dalka, isagoo baaqyo kala duwan u je ediyey Madaxweyne Farmaajo, R/wasaare Ro oble, madaxda dowlad goboleedyada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed
. Md.Xasan Sheekh oo hadalkiisa uu walaac badan ka muuqday ayaa sheegay in shacabka & maal-gashadayaasha Soomaaliyeed ay niy ad-jab weyn ku abuurtay xaaladda siyaasade ed ee Shalay dalka ka jirta.
"Waxaa kor soo martay cabsida ah in dalku galo xaalad aan la garaneyn meesha ay ku dhamaan doonto, Hooyo & Aabbe kasta waxay bilaabeen inay ka fekeraan, mustaqbalkii ay ca ruurtooda u qorsheeyeen iyo waxa iska bedeli kara, ganacsade kasta hadda waxa uu ka wal walayaa maal-gashigii uu dalkiisa ku sameys tay, shaki ayaa ku yimid rajadii wanaagsaneed ee mustaqbalka dalka,” ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh.
Sidoo kale Xasan Sheekh ayaa sheegay in xaaladaan ay abuureen hoggaamiyayaasha qaar oo ka gows adeygay fulinta wixii lagu heshiiyey, gaar aha an maareynta doorashooyinka dalka, xilligaan kala guurka ah.
"Xaaladas jirta aawgeed waxaan bogaadina yaa odaytinimada, R/wasaare Rooble oo inta badan si ay u turis ku jirto ku wajahay xaaladi hii lasoo dhaafay, waxuu u taagnaa meel dhe xe oo koox kasta ay u arkeyso qof ku taagan fulinta heshiisyadii la gaaray,” ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud.
Mar uu la dardaarmayey shacabka Soomaal iyeed waxuu yiri, "Garab istaagga caddaaladda waa waajib diini ah, dastuurina ah, ee aan qe yb ka noqono sidii ay qoyska Ikraan u heli laha ayeen caddaaladda ay xaqa u leeyihiin.”
Fariin uu u diray Taliyeyaasha ciidamada qaranka ayuu Xasan Sheekh ku yiri, "Taliyeya asha ciidamada waxaa idin saaran mas’uuliya da amniga dalka, ka digtoonaada ku milmidda siyaasadda oo ku taagnaada mabda’a aad u ta agan tihiin oo ah ilaalinta sharafka Soomaaliye ed. Xilliyadaan oo kale waa in aad iska hubisa an tallaabooyinka aad qaadeysaan.”
Madaxda dowlad goboleedyada ayuu tilma amay inay qaateen kaalin wax ku ool ah oo dal ka soo gaarsiisay inay billaabato doorasho. "Waxaan ugu baaqayaa inay sii wadaan dada alkaas ilaa dalku ka baxayo marxaladdan kala guurka ah.”
"Faa’iidooyinka uu federaalku leeyahay wax aa ka mid ah in waxa Villa Somalia ka dhacaya aysan saameyn badan ku yeelan Jowhar, Gar owe,Baydhaba, Dhuusamareeb iyo Kismaayo, nidaamkaan waxa uu naga badbaadiyey in hal meel uu dalkeenu ka burburo” ayuu yiri Xasan Sheekh.
"Mudane Farmaajo hanoo sheegin ra’iisul wasaaihii aad ku wareejisay amiga dalka waan kala noqday Shalay, caqliga saliimka ah ma aqbali karo taas, Dorraad waxaad ceyrisay Ra’ii sul wasaarihii hore markii doorasho laga hadl ay, taasi waxay muujineysaa in wax doorasho la yiraahdo aysan qorshaha kuugu jirin,” ayuu yiri Xasan Sheekh.
Ugu dambeyntii Xasan Sheekh ayaa Farma ajo kula taliyey in isaga iyo saaxiibadiis aysan Soomaaliya uga darin, haddii aysan dalkaan ka fikireyna ay ugu yaraan mustaqbalkooda ka fikiraan.
Siyaasiga caanka ah ee Xuseen Macalin Maxmuud oo horey u ahaa la-taliyihii dhanka amniga ee madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ayaa wareysi uu siiyey BBCda kagag hadlay shirka amniga qaran ee ka dhacaya Muq disho.
Xuseen Macalin ayaa shirkan ku tilmaamay mid qabyo ah, maadaama uu ka ma qanyah ay R/wasaaraha oo uu xusay inuu muhiim u yah ay shirkaasi R/wasaaraha ayuu sheegay inuu yahay madaxa guud ee fulinta, ayna qasab tah ay inuu goobjoog ah shirka.
"Shir uu ka maqan yahay R/Wasaaraha XFS lama dhihi karo waa Golaha Amniga Qaranka, maadaama ay dowladdu kala qaybsan tahay la ma garanayo sida loo kala qaybsan yahay” ay uu wareysigan ku yiri Md.Xuseen Macalin .
Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in marka laga soo tago Ra/wasaaraha ay sidoo kale qa bsoomida shirkan ay muhiim u yihiin wasiirada amniga, maaliyadda, gaashaandhigga, cadaal adda, arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha, sida uu hadalka u dhigay.
Ugu dambeyn Xuseen Macalin Maxamuud ayaa hoosta ka xariiqay in golahan uusan hey san sharciyad baarlamaan, balse kaliya loogu tala-galay in go’aan looga gaaro arrimaha gaar ka ah ee taabanayo amniga guud ee qaranka.
"Golaha amniga qaranka kama aanay gud bin baarlamaanka oo ma heysto sharciyad, bal se waa talo soo jeedin oo keliya, waxa uu ku shaqeeyaa xeer jajab, waxaana looga talagal ay in arrimaha gaarka ah ee taabanaya amni ga qaranka in looga go’aan kaaro” ayuu yiri
Hadalkan ayaa ku soo aadaya, iyada oo ma daxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday uu hore u iclaamiyey qabsoomida shirka gol aha amniga qaranka, kaas oo qorshihiisu ahaa inuu Shalay ka furmo Muqdisho, balse waxa an weli caasimada soo gaarin xubnaha shirka asi. Si kastaba, shirkan ayaa kusoo aadayo, xil li xasaasi ah, iyada oo sidoo kale qorshuhu ya hay in lagu soo bandhigayo warbixin ku saab san kiiska Ikraan Tahliil Faarax.
Maamul goboleedkii ugu horreeyey oo caddeeyey mowqifkooda shirka uu Farma ajo ku baaqay
Maamul goboleedka Puntland ayaa noqday kii ugu horreeyey ee si rasmi ah u qaadaca shi rka G/Amniga Qaranka ee uu ku baaqay madaxweyne Far maajo inuu Shalay ka furmo Muqdisho, balse baaqday.
Shirkaas, oo sida la sheegay uu taliyihii hore ee NISA Fahad Yaasiin uu kusoo bandhigayo xogta kiiska Ikraan Tahliil Faarax, ayaa u baa qay kadib markii Fahad Dorraad lagu celiyey Ja buuti, oo uu Muqdisho iman waayey, kadibna dib ugu laabtay Istanbul.
G/Amniga Qaranka ayaa waxaa ku midey san madaxweyne Farmaajo, Rwasaare Roob le,madaxda maamul goboleedyada & taliyayaa sha ciidamada amniga.
Wasiirka Arrimaha Arrimaha Gudaha Punt land Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ay aa sheegay in Puntland aysan ka qeyb-galeyn shir uu ku baaqay Farmaajo. Wasiirka ayaa meesha ka saarey doorka Farm aajo ee Shirarka masiiriga ah ee loo qabanayo dalka, isagoo ku sifeeyay inuu yahay Madax weyne hore, oo sharciyaddii ay ka dhamaatay hadda.
Maamul goboleedyada kale ayaan weli cad deyn mowqifkooda, hase yeeshee waxaa la fil ayaa in sidoo kale Jubaland ay qaadacdo shir kan,halka HirShabeelle, Galmudug &K/ Galbe ed,oo xulafo la ah Farmaajo ay aqbali doona an.R/W/re Rooble ayaa horey u diiday in kiiska Ikraan Tahliil uu noqdo mid looga doodo shirar iyo guddiyo, wuxuuna ku amray max kamadda ciidamada qalabka sida inay baarto, taasi oo
ah sida ay doonayaan qoyska Ikraan.
Jeneraal Afcadey oo ku guuleystay kurs igii Senator Maxamed Aamiin
Magaalada Jowhar waxaa Xalay ka socota doorashada 2 ka mid ah kuraasta Aqalka Sare ee dalka, waxaana Shalay soo gabagabow day doorashada hal kursi, kaas oo loo doortay Senator Axmed Maxamed Cali Afcadey.
Senator Afcadey ayaa wareegii 1aad ee doorashada kursigaas 52 -cod uga guuleystay musharaxii la tartamayey Maxamed Amiin Sh. Cismaan oo helay 44-cod.
Musharaxa laga guuleystay ee Maxamed Amiin Sh.Cismaan waxuu kursigaan ku fadhi yey afartii sano ee lasoo dhaafay.
Musharaxa guuleystay ee Senator Afcaddey oo ah Sarkaal Militeri ah ayaa 2jeer soo noq day Taliyihii ilaalada gaarka ah ee Madaxtooy ada Soomaaliya, sidoo kale xilal kale ayuu ka soo qabtay taliska CXDS.
Haatan waxaa Jowhar ka socota doorash ada kursiga 2Aad ee Xalay la dooranayo, wax aana sidaas ay ku noqonayaan kuraasta la do ortay lix, halka 2da hartay loo balansan yahay in la doorto Axadda , waxaana sidaas lagu soo gabagabeynayaa doorashada 8-da kursi ee taallay Jowhar – HirShabeelle.
Puntland iyo Galmudug oo heshiis gaaray
Mas’uuliyiin ka kala tirsan maamullada Pun tland&Galmudug ayaa wada-hadallo ka yeesh ay colaad ka taagan qeybo ka mid ah G/Mud ug, si loo soo afjaro dagaal beeleedyada mu ddada fog ku soo noq-noqday gobolkaasi.
2da dhinac ayaa marka hore is afgarad ku gaaray in xabad jo ojin la kala dhex-dhigo beelaha ku diriraya dee gaano hoostaga magaalooyinka Galinsoor iyo Dhabbad.
Guddoomiyaha maamulka Dhabbad Aadan Cabdinuur Galaal oo ka warbixiyey wada-hada llada billowday ayaa shaaciyey inuu hormuud u yahay G/Gobolka Mudug ee Puntland, Cab diladiif Muuse Nuur, isaga oo rajo weyn ka muujiyey wada-hadalladaasi.
"Mar haddii Puntland iyo Galmudug ay ku midoobeen, waxaan ka qabnaa rajo weyn oo weyn in colaada lasoo afjaro. Sababta waxaa weeye, awal hore waxay ahayd aan isku imaano iyo saas aan yeelno” ayuu yiri guddoomiyaha Dhabbad Aadan Cabdinuur Galaal. Guddoomiyaha ayaa sidoo kale intaasi kusii daray "2 qolo oo shacab ah ayay ahaaye en oo aan haysan xoog ay wax ku qabta an,”.
Puntland iyo Galmudug ayaa muddooyinkii la soo dhaafay xoojiyey iskaashiga ay leeyihiin, si loo adkeeyo nabadda ka jirta magaalada Gaa lkacyo iyo guud ahaan gobolka Mudug.
Wiil dhallinyaro ah oo isku daldalay xar untiisa ganacsi ee Muqdisho + Sababta
Fal aad looga naxo ayaa wuxuu Shalay ka dhacay M/Muqdisho ee Caasimadda Soomaal iya, gaar ahaan D/Waaberi, halkaasi oo wiil dhall inyaro ah ii isku dilay.
Wiilka dhallinyaro ah, oo lagu magacaabay Cabdiraxmaan C//hi oo Harqaan ku lahaa meel u dhow isgoyska Dabka ayaa isku dal-dalay gu daha xaruntiisa Ganacsi. Waxaa la waayey ma alintii Khamiistii aheyd mar kaas oo la waayey nolol iyo geeri.
Ehelada wiilkaan ayaa go’a ansaday Shalay inay jabiyaan xaruntiisa, wax aana si lama filaan ah loo arkay isagoo ku xir an xariga uu isku daldalay, oo meyd ah.
Lama ogo waqtiga rasmiga ah ee uu Cabdirax maan is daldalay maadaama la waayey Maalin tii Khamiista aheyd, waxaana loo badinayaa in uu is daldalay Jimcihii, sida ay sheegeen xub no ka mid ah ehelka.
Qaar ka tirsan dadka deegaanka ayaa shee gay in wiilkaan dhallinyarada ah uu maalmihii dambe ku jiray buuq dhanka qoyska ah, oo aan faah-faahin laga bixin.
Cabdiraxmaan ayaa qoray warqad dardaar an ah oo uu ku sheegay inuu leeyahay xaas & 2 Carruur, warqaddaas oo laga ag helay meyd kiisa. Wiilkaan ayaa ahaa dhallinyaro oo si we yn looga yaqaanay Degmada Waaberi, wuxuu na mudo dhowr sano ah ka shaqeenayey toils ta dharka noocyadiisa kala duwan.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soomaali ya oo gaaray xarunta uu wiilkaan isku daldalay ayaa meydkiisa u qaaday xarunta dambi baar ista ee CID.
Buuq ka dhashay doorashada Aqalka Sare ee Jowhar ka socota
Wararka ka soo baxaya Jowhar waxa ay sheegayaan in doorashadii Hirshabeelle ee Aqalka Sare ee halkaas caawo ka socotay ge bi ahaanba lagu kala tagay.
Waxaa caawo la dooranayay ku rsiga beesha Adeerada ee Xawa adle,waxaana u tartamayay 5 mu sharax oo midi tanaasulay.
Markii tirintii la dhameeyay oo balse aanan natiijada lagu dhowaaqin ayay koox xildhibaa no ah inta soo istaageen makarafoonka qab sadeen, buuqna fureen.
Sida ka muuqatay yeerinta codadka la kala heley waxaa codadka ugu horeeyay Cabdiqaa dir Xanafi oo ah ganacsade reer Muqdisho ah, waxaana ku xigay Shacbaan.
Lama oga sida kursigani laga yeeli doono, iyada oo uu jiro kursi kale oo beesha Jejeele oo isna buuq galay, musharixiintii ka qeybgala yayna ay Xamar ku laabteen iyaga oo cabasho qaba.
Guddoomiye Cirro "Shaqo la'aanta Somali land waxay ku dhawdahay 70%"
Guddoomiyaha xisbiga Waddani Cabdirax maan Maxammed Cabdillaahi (Cirro), ayaa sheegay in cilmibaadhis la sameeyay ay sheeg tay in 70% dhalinyarada Som aliland, ay shaqo la'aan yihiin isagoo sheegay in marka laga yimaado dhaqaale la'aanta So maliland ka jirta loo baahanyahay in qorshe cad laga yeesho shaqo xumada.
Cirro oo ka hadlayay qalinjabinta dufcadii 19aad ee ka baxda Jaamacadda Hargaysa, ay aa sheegay in tirada ardayda sannadkasta soo baxaysaana sii kordhayso, isla markaana ay shaqo la'aani jirto."Cilmi baadhis la sameeyay shaqa la'aanta dhalinyarada Somaliland waxay ku dhawdahay 70%, inagoo og itaalkeena dha qaale, hadana waxa loo bahanyahay qorshe cad oo ku talo gal ah, oo ardayda loogu talo ga lo, sanad wal ba intaaso arday soo baxayso, tir aduna sii kor dhayso" ayuu yidhi Cirro.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in Somalila nd horumar badan samaysay marka loo ee go halkii ay taagnayd sanado ka hor laakiin loo ba hanyahay in la dadaalo oo dadkuna wax bar taan. "Shalay Somaliland horumar badan way samaysay, oo waxa laga yaaba dee 20 sano ka hor inanay jaamacado lahayn Somaliland, Jaamacadda Hargaysa markii la samaynayay waan ogaa, Camuudna iyadoo markaa la sam eeyay ayaan dalkan imid, horumarka waxa loo bahanyahay inaynu hore usii marino" ayuu yidhi Cirro.
"Waxanan rumaysanahay horumarka Som aliland iyo barwaaqadeeduba inay ku iman kar to waxbarasho, xirfad & aqoon. Markaa in ay nu xoojino ayaynu u baahanahay" ayuu hadal kiisa ku daray Cirro.
Sida lagu xusay qiimayn ay soo saartay Wa saaradda Shaqo gelinta, Qoyska iyo Arrimaha Bulshada Somaliland 30, December, 2019, he erka shaqo la'aanta bulshada Somaliland ayaa ah 75%, warbixinta ayaa sheegtay in 30% dad ka shaqo la’aanta ahi ay yihiin dheddig, 20% ay yihiin rag dhallinyaro ah, halka 15% kalena ay yihiin dad ka waaweyn oo aan jinsigooda la sheegin.
Diyaaradda Turkish Airlines oo kasoo degt ay Muqdisho iyo Fahad Yaasiin Xaaji oo…
Diyaarad ay leedahay shirkadda Turkish Airl ines ayaa Shalay kasoo degtay M/ Muqdisho, taas oo Dorraad baaqatay islamarkaana dib uga laa batay dalka Jabuuti. Ilo wareedyo la gu kalso on-yahay ayaa Caasi mada Online sheegtay in ay u xaqiijiyey in diy aaraddan uusan la socon la-taliyaha amni ga q aranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, balse ay keentay rakaab isugu jiro kuwa Dorraad laga cel iyey garooonka diyaar adaha Jabuuti iyo kuwa kale oo cusub.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa dowladda Jabuuti ku eedeysay inay Dorraad xanibtay Fa had Yaasiin, hase yeeshee Jabuuti waa ay be enisay waxayna sheegtay in diyaaradda ay u baaqatay cilad.
Weli ma cadda sababta diyaaraddii uu Fah ad uu uga haray diyaaraddii Shalay, hase yee shee waxaa Dorraad jiray xog sheegeysa in DFS ay amartay diyaaradaha caalamiga ah ina ysan soo qaadi karin Fahad.
Wararka ayaa intaasi kusii daraya in Fahad Yaasiin, oo diyaaraddii Dorraad dartiis loo celiy ey, uu soo kireysan doono diyaarad qaas ah, si u soo gaaro M/Muqdisho ee caasimada Soomaaliya.
Arrimahan ayaa ku soo aadayo, iyada oo ha atan xiisadda ka taagan Villa Soomaaliya ay sii xoogeysatay, taas oo ka dhalatay kiiska Ikraan Tahliil Faarax.
Fahad Yaasiin ayaa qorshihiisa waxa uu ya hay inuu M/Muqdisho uga qeyb-galo shirka go laha amniga qaranka ee uu iclaamiyey madax weynaha muddo xileedkiisu dhammaaday, si uu ugu soo bandhigo warbixinta la xiriirta kiis ka ‘dilka ah’ ee Ikraan Tahliil.
Dorraad ayey aheyd markii diyaaraddii sidday Fahad Yaasiin ay ka noqotay wadanka Jabu uti, iyada oo Villa Soomaaliyana ay dowladda Jabuuti ku eedeysay inay xanibtay Fahad Yaa siin, walow wasiiro ka tirsan Jabuuti oo ka had lay dhacdadaas ay iska fogeeyeen eedeynta asi.
Ururka Midowga Yurub ayaa markii ugu ho rreysay bayaan rasmi ah ka soo saaray xaal ad da Sodalka & xiisadda ka qaraxday Villa Soo maaliya ee u dhexeyso madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday iyo ra’iisul wasa araha.
Bayaanka, oo uu soo saaray wakiilka sare ee Midowga Yurub ee siyaasadda arr imaha dibedda iyo amniga Josep Borrel ayaa waxaa loogu baaqay madaxda Soomaaliyeed inay is xakameeyaan, ayna ilaaliyaan xasiloonida guud ee dalka.
"Midowga Yurub wuxuu ugu baaqayaa Mad axweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed iyo Ra’iisul Wasaare Rooble inay soo afjaraan is-ma andhaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya xilligan,” ayuu yiri Borrel
Midowga Yurub ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in deegaanshaha u fure u yahay bad-qab ka guud ahaan dadka Soomaaliyeed, loona baa hanyahay in laga fakiro mustaqbalka.
"Waxay tani fure u tahay bad-qabka dadka So omaaliyeed. Dhammaan daneeyeyaasha arrima ha Soomaaliya waa inay xakameeyaan xasillooni da guud ee Soomaaliya iyo gobolka.” ayuu yiri.
Sidoo kale qoraalkaan ayaa waxaa lagu shee gay in loo baahan-yahay in aan la hakin geedi so codka doorashooyinka dalka, iyadoo la raacayo jadwalkii hore loogu heshiiyey ee 27 May.
Hadalka ka soo yeeray Midowga Yurub ayaa ku soo aadayo, iyada oo meeshii ugu sarreysay ay gaartay xiisadda siyaasadeed ee Villa Sooma aliya, taas oo saameysay doorashooyinka.
Si kastaba, beesha caalamka oo horay warsaxa afadeed u soo saartay ayaa cambaareysay xiisa ddan, iyada oo shaacisay inay wiiqeyso xasi loonida haatan ka jirta gudaha Soomaaliya
Ciidamada Booliska M/Washin gton oo heeg an buuxa la geliyay + sababta
Boqollaal ka mid ah ciidanka Booliska ayaa Shalay la dhigay qeybo ka mid ah waddooyinka soo gala Aqalka Cad iyo Xarunta Koongareeska ee magaaladan Washington D.C, si ay uga hortagaan suurt agalnimada rabshado ka dha ca mudaaharaad lagu wado in Shalay ay sameeyaan boqolla al ka mid ah taageerayaasha madaxweynihii ho re ee Mareykanka Donald Trump.
Dadka isugu iman doono caasimadda Marey kanka ayaa lagu sheegay in ay gaarayaan boq l laal qof.Waxa ay sheegeen in dibadbaxoodu uu yahay mid ay ku taageereyaan dadka u xiran fal danbiyeedyadii ka dhashay weerarkii ay 6-di bishii January ee sannadkan mudaaharaadayaal careysani ku galeen xarunta Koonagreeska Mar eykanka ee Capitol Hill.
Xilligaasi ayaa waxaa xarunta ka socday an sixinta doorashada madaxweyne Biden. Dad kaasi oo taageersanaa madaxweynihii hore ee Trump ayaa diidanaa ansaxnimada doorashadii 2020-kii ee uu ku soo baxay madaxweyne Biden.
Wasiirkii Gaashaandhiga Holand oo is casishay.
Wasiirka Gaashaandhigga dalka Holland Ank Bijleveld, ayaa is casishay ka dib markii koox Afg aanistaan ay kasoo daad-gurayn rabtay qabsad een kooxda Taaliban,waxa sidoo kale hore isu casilay Wasiirkii Arrimaha dibadda ee Holand ka dib markii aqalka ho ose ee baarlamaanka uu ku dhaliilay dowladda si da ay u maareysay daad-gureynta Qaxoontiga Afghanist an.
Wasiirad Bijleveld, ayaa iyada na lagu cam baareeyay dib u -dhac ku yimid daad -gureynta dadka rayid ka ah ee Afghanistan,iyadoo intaa ka dib warbaahinta ka sheegtay is casilaadeeda iya doo xustay inay u gudbin doonto Boqorka dalka.
is casilaada ayaa timid ka dib markii Baarlama anka dalkaasi meel mariyey mooshin cambaar ayn ah oo ka dhan ah Dowladdu sida ay u maar aysay daad-guraynta.
Mareykanka oo ugu hanjabay Itoobiya inuu saari doono cunaqabateyn culus.
Mareykanka ayaa u gogol-xaartay tallaabo cu naqabateyn cusub oo dheeraad ah lagu saarayo dhinacyada ku dagaallamaya waqooyiga Itoob iya, halkaas oo kumanaan qof lagu dilay, malaay iin kalena ay u baahan yihiin gargaar bani’a ada mnimo.
Amar fulineed cusub oo ka soo baxay Aqalka Cad ayaa u oggolaanaya Washington inay qaad do tallaabo ciqaab ah oo ka dhan ah xubno ku ji ra dowladaha Itoobiya iyo Eritrea, Jabhadda Xor eynta Dadka Tigrayga (TPLF) iyo dowlad-deega anka Amxaarada haddii ay door ka qaataan sii socoshada colaadda, carqal adeynta gargaarka bani’aada mnimada ama ay geystaan xa dgudub yo daran oo xuquuq da aadanaha ah.
Tallaabadan oo cadaadiska ku saareysa dhi nacyada dagaallamaya inay yimaadaan miiska wadahadalka, ayaa timid ka dib markii Washington ay mar ar badan ku baaqday in wada hadal lagu dhammeeyo col aadda iyo in gargaar la gaarsiiyo gobolka waqoo yi ee Tigray, halkaas oo colaaddu ka bilaabatay.
Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa ku hanjabay in maqnaasha ha xabad-jooginta iyo in wadahadal lagu dham meeyo colaadda Itoobiya inay sababi doonto in Mareykanku uu magacaabi doono hoggaamiyey aal, ururro iyo hay’ado gaar ah, kuwaas oo la sa ari doono cunaqabateyn cusub.
Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa qortay inwarqad uu ra’isul warsaaraha Itoobiya Abyi Ahmed uu diray madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu Mareykanka ku eedeyay inay ku gul-darreysteen inay ka taageeraan halganka ay kula jirto TPLF.
Dowlad-deegaanka Amxaarada ayaa sheegt ay inay iyana ka walaacsan tahay in Amxaarada lagu daro amar fulineedka Madaxweynaha Mar eykanka, laakiin waxay ballan qaadday inay taa geeri doonto baaritaanka Waaxda Arrimaha Dib adda Mareykanka iyo Waaxda Maaliyadda.
Faransiiska oo u yeeratay safiiradooda Aus tralia iyo Mareykanka kadib markii ‘dhabar ka laga mindiyeeyay’
D/Faransiiska ayaa Jimcihii u yeertay danjira yaash ii u fadhiyay Mareykanka iyo Australia si ay ugala tashadaan khi laafka ba’an eeku sa absan baa bi’inta qandaraas Austr alia uga iib san laheyd marakiibta dagaal ee quusa. Wasiirka Arrimaha Dibadda France Jean-Yves Le Drian ayaa she egay in madaxweyne E mma nuel Macron uu am ray in dib loogu yeero danjir ayaashaas kadib ma rkii Australia ay ka baxday heshiiskii ay ku iib san lahayd maraakiib ta dagaalka ee badda qu usa ee Faransiiska, si ay u iibsadaan kuwa Mare ykan ka. "In laga ba xo mashruuca kala iibsiga Ma raa kiibta dagaalka ee quusa ee u dhaxeeya Aus tralia iyo Faransiis ku oo laga shaqeenayey tan iyo 2016 waxay ka dhigan tahay dhaqan aan la aqbali karin inuu dhexmaro xulafada” ayuu yiri Jean-Yves Le Drian
"France waxay dareemeysa in dhabarka laga mindiyeeyey,” ayuu yiri.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Arbacaddii ku dhawaaqay isbahaysiga cusub oo dhanka difaaca ah oo dhex mara Mareykanka iyo Australia, wuxuuna Biden sheegay in Australia uu isbaheysigaan ka caawin doono tikniyoolajiy adda gujiska nukliyeerka, difaaca Internet-ka, sirdoonka macmalka ah iyo awoodaha badda hoosteeda.
Faransiiska ma aysan qarin carada ay ka qa aday heshiiskaas, waxayna maalintii Khamiista aheyd ku eedeysay Australia inay gadaal ka too gatay halka ay Washinton ku eedeysay inay la soo baxday dhaqankii lagu yaqaanay madaxwey nihii hore ee Mareykanka Donald Trump.
"Runtii tallaabadaan waa gadaal la toogasho, waxaan Australia la sameysanay xiriir ku dhisan aaminaad balse kalsoonidiii waxay kusoo dha mmaatay khiyaano,” ayuu yiri Le Drian.
Mareykanka oo qirtay in duqeyn diyaar adeed oo ka dhacday Kabul ay carruur ku laayeen.
WASHINGTON:- Duqeyn ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ka fuliyeen magaalada Kabul bishii hore ayaa lagu dilay ilaa 10 qof oo rayid ah, oo ay ku jiraan 7 carruur ah, sida ay sheegeen milatariga Mareykanka Ji mcihii, iyagoo raaligelin ka bixiyay wax ay ugu yeereen "khalad naxdin leh”.
Waaxda Gaashaandhigga ee Pentagon-ka ayaa sheegtay in weerarkii 29-kii bishii Agoosto lala beegsaday qof ismiidaamiye ah oo ka tirsan kooxda Daacish, kaas oo halis weyn ku ahaa ciid ammada xulufada Mareykanka ee ku sugnaa gar oonka diyaaradaha markii ay dhammaystirayeen marxaladihii ugu dambeeyay ee ka bixitaankooda Afghanistan.
Laakiin markii ay soo baxeen warar sheegaya in dad rayid ah ay waxyeello soo gaartay, ayaa Jeneraalka ugu sarreeya Mareykanka wuxuu weerarkaas ku tilmaamay mid xaq ah.
Madaxa Taliska Dhexe ee Maraykanka, Gen eral Frank McKenzie, ayaa sheegay in xilligaas uu ku kalsoonaa in duqeyntu ay ka hortagtay kha tar ku soo fool leh ciidamada ku sugan garoonka diyaaradaha "Baaritaankeennu wuxuu hadda ku soo gabagaboobay in duqeybtaas ay ahayd khal ad naxdin leh,” ayuu McKenzie u sheegay wariy eyaasha. Dilka dadka rayidka ah, oo ay fulisay duqeym aha diyaaradaha aan duuliye lahayn ayaa dhaliy ay su’aalo ku saabsan mustaqbalka weerarada la-dagaallanka argagixisada Mareyk anka ee dal kaas. REUTERS.
Lafta-gareen oo la kulmay xubno ka socd ay Guddiga xaqiijinta qoondada Haween ka
Madaxweynaha DGKGS Md.C/caiis Xasan Maxamed Lafta-gareen ayaa Shalay xafiiski isa kulan kula qaatay xubno ka tirsan Guddiga xaqiijinta qoondada haweenka 30% oo gaaray Magaalada Baydhabo.
Kulanka dhexmaray Lafta-gareen iyo xubnaha Guddiga ayaa waxaa looga wada hadl ay sidii loo xaqiijin lahaa qoon dada Haweenka 30% ee golayaasha Baarlam aanka Federaalka Soomaaliya.
Xubnaha Guddiga ee ka qeyb galay kulan ka ayaa Madaxweynaha K/Galbeed u sheegay in muhiim ay tahay ilaalinta qoondada Haween ka 30%, si ay qeyb uga noqdaan doorashooyin ka dalka ka dhacaya, iyagoona xusay inay rajo wanaagsan qabaan.
Guddiga xaqiijinta qoondada haweenka Bat uulo Sh Axmed Gaballe ayaa horey Madaxda DFS& kuwa maamul Goboleedyada ka dalba tay ilaalinta qoondada Haweenka ee doorasho oyinka 2da Aqal ee Baarlamaanka.
Golaha Ammaanka oo war kasoo saaray khilaafka Farmaajo iyo Rooble
Golaha Ammaanka QM ayaa qoraal kasoo saaray khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Fa rmaajo & R/wasaare Rooble, kadib markii uu warbixin siiyey eregyga gaarka ah ee QM ee Soomaaliya James Swan.
"Xubnaha G/Ammaanka waxay walaac qoto dheer ka muujinayaan khilaafka sii socda ee ka dhex-jira dowladda Soomaaliya iyo saameynta taban ee uu ku yeelanayo hana anka iyo jadwalka doora shada,” ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay Golaha Ammaanka.
"G/Ammaanka waxay ku boorinayaan dham maan saamileyda inay muujiyaan is-xakam eyn,waxayna hoosta ka xariiqayaan muhiimad da joogteynta nabadda, ammaanka iyo xasill oonida Soomaaliya.”
Xubanah G/Ammaanka ayaa sidoo ku boor iyey dhammaan dhinacyada Soomaaliya inay khilaafyadooda ku xaliyaan wada-hadal, danta shacabka Soomaaliyeed darteed.
"Waa inay muhiimadda siiyaaaan qabash ada doorasho nabad ah, daah-furan, la isku ha leyn karo islamarkaana loo dhan yahay oo ku dhacda waqtigeeda, si waafaqsan heshiisyadii 17-ka September iyo 27-ka May,” ayaa lagu yiri bayaanka.
Xubnaha G/Ammaanka ayaa ku booriyey DFS & D/G/yada inay xaqiijiyaan in khilaaf ka sta oo siyaasadeed aanu ka weecin ficil loo mi deysan yahay oo ka dhan ah Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee mintidiinta.
Xubnaha G/Ammaanka ayaa mar kale xaqiij iyey ixtiraamka ay u hayaan qarannimada, ma dax-banaanida siyaasadeed, seeraha dhuleed iyo midnimada Soomaaliya.
James Swan oo Xaaladda Soomaaliya u ga Warbixiyay Golaha Ammaanka ee QM
Wakiilka Xogahaya Guud ee QM u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa xubnaha G/Am niga ee QM warbixin ka siiyay xaalad da guud ee Soomaaliya ay xillig anku sugan tahay. Xubnaha G/Am maanka ayaa muujiyay sida weyn ee ay uga walaacsan yihiin khilaaf ka joo gtada ah ee ka dhex taagan madaxda DFS & saamaynta ay ku yeellan kar to jadwalka door ashada & hannaanka doora shada. Golu hu wuxuu ku booriyay dhammaan dhinacyada in ay is-xakameeyaan, wuxuuna ho osta ka xa rr iiqay muhiimadda ay leedahay ilaa linta nab adda, amniga iyo xasilloonida Soom aaliya.
Xubnaha G/Ammaanku waxa ay ku boorriye en dhammaan dhinacyada inay ku xalliyaan khilaafaadkooda wada-hadal dan u ah Soom aaliya& inay mudnaanta 1aad siiyaan si nabad gelyo ah oo ay ku dheehan tahay doorashooy in hufan, lagu kalsoonaan karo oo loo dhan ya hay kuna dhacda muddadii lagu heshiiyay si waafaqsan heshiisyadii 17 -kii September iyo 27 -kii May.
Xubnaha Golaha Ammaanka ayaa ku boor iyay DFS &Dowaha xubnaha ka ah Federaalka inay hubiyaan in wixii khilaaf siyaasadeed ah aysan ka leexin tallaabooyinka mideysan ee ka dhan ah Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee xagj irka ah.
SHIRKADDA ISGAARSIINTA SOMTEL OO TODD OBAADKII 9AAD
ABAALMARISAY KU DHAWAAD 1000 MACAAMIIL
Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qeyb-galay Xildhibaano, Gudo omiyayaasha Degmooyinka yaaqshiid & degmada shibis, Ururada dhal inyarada,Ururada bulshada rayidka Mas’ uuliyiin ka tirsan shirkadda isg aarsiinta somtel,.
Ugu horeyntii waxaa munaasabada hadal jeedin rasmi ah ka same yay Madaxa Hey’ada Guryasamo Axmed Abshir geedi oo aad u bogaa diyaya Somtel kuna tilmaamay Ololaha ku Shubo Oo Guuleyso 10,000 Hadiyadood Mid ay u baahnaayeen bulshada soomaaliyeed
"Waa barnaamij macaamiisha si daah-furanna siibkooda u tijaabiy aan iyagoo sameeyna ya ku shubashada kaarka ku hadalka & Data in ter net-ka Kuna helayaan hadiyado qaali ah sida gaari Hyundai-ga Wa xaan aad ugu farxay in gaariigii ugu horeeyay Hyundai ay ku guul eysa tay Mamo beeraleey dan yar ah oo mudneyd in laguabaalmariyo
Waxaa sidoo kale Munaasabada ka hadlay gudoomiyaha Degmada Shibis Mudane Cali Axmed Cabdulle oo ku dheeraaday ahmiyada Olola ha Ku shubo oo guuleeyso 10,000 Hadiy adood "Waxaan u hambalyee ynayaa shirkad da isgaarsiinta Somtel oo ah Shirkadii ugu horeysay ee macaamiisheeda ku celisa 10,000 Hadiyadood daqligii yaraa ay maca amiisha shirkadda ku soo celiyeen waa talaabo amaan & bogaadinba mudan waxaan marqaati ka nahay in macamiisha guuleysatay si toos ah loo gu wareejiyay abaalmarinadii ay ku guuleyste en waxa’ ay shirk adduna ku sharaftay inaan si toos ah u gudoonsiino macaamiisha guul eysa tay todobaadkan”
Waxaa sidoo kale Munaasabada ka hadlay Gudoomiyaha Degmada Yaaqshiid mudane Axmed C/laahi Cariif oo aad u bogaadiyay kaalinta muuqata ee shirkadda isgaarsiinta somtel ‘Waxaan goobjoog u ahaa Mu naasabada daah-furka ololaha ku shubo oo guuleyso 10,000 hadiya dood taasoo lagu qabtay Hotel Elite ee magaalada muqdisho Waa barn aamij taabaga lay oo taddobaadkii 9aad aan xaadir u ahay hadiyadaha la gudoonsiinayaa macaamiisha guuleysatay waa talaabo ku dayasho mudan in bu lshada soomaaliyeed waxa lagu celiyo waxaan leeyahay soomaaliyeed waad qaadatay kaalintii laga sugayay shirkadda dadweyn aha Soom aaliyeed ay wax ku leeyihiiin taasoo laga rabo inay u damqa to bulshadeena jilicsan”
Waxaa sidoo kale munaasabada Cusmaan Saalax Muuse oo ku guu leystay bajaaj todoba adkan ‘Ma filaneynin in somtel igu abaalmarineyso bajaaj waxaan uga faa’ideynayaa ehelkeyga waa shaqo abuur aan aad ugu baaahneyn xaqiiqdii marka somtel wey ku mahadsan tahay inay macaamiisheeda dhiiragelin la taaban karo ay u sameeysay waa wax la gu faano”
Waxaa erayo kooban munaasabada ka sheektay Xafso Axmed Yusuf oo ku guuleysatay 10gr oo dahab ah"Waxaan u heystay markii ugu hor eysay ee leeysoo wacay in prank leygu sameynayo waxaan galay page-ka shirkadda waxaan ogaaday in si sax ah aan u guuleystay somtel ay aba almarineyso xaqiiqdii farxad darteed ayaan la ilmeeyay Shalay waa leey gudoonsiiyay”
Ugu danbeyntii waxaa Shucuurteeda Cabirtay Najmo Cabdi Muuse oo ku guuleysatay Labtop ‘Waxaan ahay ardayad wax ka barata mid ka mid ah jaamacadaha muqdisho aad ayaan u gu baahi qabay hadiyad aan qaaliga ah ma filaneyn in somtel igu abaalmarineyso waxan uga faa ’ideysan doonaa qorida buuga qalinbad alshada jaamacada oo aan dha waan qoraayo
Madaxa Waaxda ganacsiga ee Somtel, Md.: C/lahi Cali Caamir oo soo xiray munaasabadda macaamiisha lagu abaalmarinayay ayaa yiri
"Dhammaan macaamiisha Shirkadda Somtel waxaan u rajeynay naa inay ku guuleys taan 10,000 hadiyadood, Shirkadd uugu talagalnay Macamiisheeda sharafta leh hadiyadaha anoo Ugu sareeyo gaariga hy undai oo ay horay ugu guuleysatay Mamo beeraleey dan yar ah oo ku nool baadiyaha gobalka hiiraan Waxan rajeeynayaa in bishaan uu ku gu uleysto macaamiil aad ugu baahi qaba si shirkadda ajar fara badan ugu hesho”shirkadda isgaarsiinta somtel oo toddobaadkii 9aad abaalmarisay ku dhawaad 1000 macaamiil
Contract level ILICA-6
DurationOngoing contract (Open-ended, subject to organizational requirements,
Application period 14-Sep-2021 to 27-Sep-2021
UNMAS as a component of the United Nations Support Office in Somalia (UNSOS) provides explosive hazard management capacities, including mitigation, to AMISOM as part of a logistical support package. Non-lethal tactical advice and analysis are delivered by UNMAS technical advisors located in each AMISOM Sector Headquarters and at AMISOM Force Headquarters, who support AMISOM planning and operations. UNMAS support includes both enabling ("operate in spite of IEDs”) and response ("defeat the device”).As a component of the UN Mission in Somalia (UNSOM) UNMAS also supports the Federal Government of Somalia, including the Somali Police Force, Somali Explosive Management Authority and National Security Advisor